Bogga ugu weyn Sida loo Noqdo Bartender oo aan Khibrad u lahayn 2022
Weligaa ma aragtay baarkaleyda oo cabbitaanno isku daraya oo ma yaabtay haddii uu jiro dugsi gaar ah oo loogu talagalay baararka? Hagaag, waan haystaa, waxaanan ogaaday inaanad u baahnayn inaad dhigato dugsi kasta si aad u noqoto baarka baarka.
Halkaan ka baro sida loo qaso cabitaannada sida baarkaar yaqaan oo aan lahayn waayo -aragnimo barten -nimo hore.
In kasta oo ay jiraan dugsiyo aad tegi karto, waad ka leexin kartaa si ay weli u noqdaan baararka. Dhab ahaantii, kuwa baarka ka ganacsada waxay ku taliyaan inayan dhigan dugsiyadaas. Kaliya hel lataliye waad fiicantahay.
Iyada oo aan wax badan la isweydiin, waa kan tusahaaga dhammaystiran si aad u soo degto shaqo baarka ka dhigaysa mid dhammaystiran oo cusub.
Sida Loo Noqdo Bartender Xataa Aan Lahayn Khibrad
Kuwani waa siyaabaha lagu noqdo baarka -baarkaar oo aan lahayn khibrad. Akhri iyo la soco.
Xitaa haddii aad rabto inaad dhigato iskuul bartan, waxaad u baahan tahay inaad bilowdo ku -tababbarka guriga kahor intuusan dugsigu bilaaban. Baro afsoomaaliga sidoo kale.
Waa kuwan qaar ka mid ah buugaagta muhiimka ah si loogu daro ururintaada oo aad bilowdo akhrinta.
Qaybaha Buugga Bar: Farsamada Cocktail
Buugga Bartender ee Meehan
#2. Tag Dugsiga Bartending
Dugsiga Bartending ayaa si dhaqso leh kugula socon doona si aad u xaqiijiso hadafkan.
Dugsiga baarka, waxaad ku baran doontaa waxyaabaha aasaasiga ah oo ay ku jiraan mixology. Sidoo kale, waxaad baranaysaa asluubta looga baahan yahay xirfaddan.
Tusaalaha iskuulka wax baaraya waxaa ka mid ah The Nimble Bar and Co.
#3. Qaado Shahaadada Bartending
Tani looma baahna gobollada oo dhan, laakiin waad ka faa'iidaysan kartaa tan gaar ahaan haddii aadan lahayn khibrad.
Si aad u hesho ruqsad, waxaad u baahan tahay inaad gaarto da'da ugu yar ee khamriga loogu adeego meel fagaare ah taasina waxay ku kala duwan tahay gobolka.
XIDHIIDHKA: 25ka ugu Sarreeya ee Shabakadaha Lacagta Ugu Badan Bixiya 2022 | Shirkadaha Ugu Fiican
Intaa waxaa dheer, waa inaad taqaanaa sharciyada iyo ciqaabta khuseeya carruurta aan qaan -gaarin, Aqoonsiga marxaladaha maan -dooriyaha macaamilka iyo sida loo maareeyo, iyo kuwo kale.
Haddii aad u socotid koorso onlayn ah, hubi inay tahay mid gobolku oggolaaday.
Habkan, waxaad noqon kartaa nin baarka ka shaqeeya oo aan khibrad lahayn.
#4. Noqo Barbar
Baarayaasha dhabta ah waxay caadi ahaan kula taliyaan kuwa doonaya inay noqdaan baarkaarleyda oo aan lahayn waayo -aragnimo inay ku bilaabaan bar -barbar. Mid ayaa ku taliyay inaadan khasaarin lacag dugsiyada laakiin maal waqtigaas oo noqoshada bar -barre.
Dib -u -dhigiddu uma baahna khibrad, kaliya rabitaanka shaqada. Asal ahaan waxaad noqon doontaa kaaliye, tanina waxay ku gelineysaa meel wanaagsan oo aad ku fiirsato oo aad wax ku barato
#5. Ka biloow Baarka Huteelka
Siyaabo kale oo aad uga gadan karto baarka sidii bakhaar aan khibrad lahayn ayaa ah inaad ka bilowdo baar makhaayadda.
Faa'iidada qaadashada wadadan ayaa ah inay kuu hayaan barnaamijyo tababar. Waxay kaloo tababari doonaan inay cabitaannada isku daraan heerkooda.
Sidoo kale, waxay bixiyaan jawi yar si ay u bilaabaan tababar.
kan akhri, 20 Ku Samee Lacag Hoosta Shaqooyinka Miiska 2022
#6. Raadi Bartent Mentor
Markaad shaqo raadinayso, ka fiirso baarkalayaasha diyaar u ah inay ku tababaraan.
Waxay kugu tababari doonaan khibradooda hodanka ah ee aan lagu dhigi karin fasalka dhexdiisa.
#7. Baro sida loo shubo Cabitaannada
Waxaad u baahan tahay inaad baratid sida si sax ah loogu shubo cabitaannada si aad u gaarto dheelitirka u dhexeeya khamriga iyo makiinadda. Tani waa lama huraan in la barto haddii aad rabto inaad noqoto sayid is biirsaday. Waxaad ku maalgashan kartaa aalado yar yar oo wax baaraya oo waxaad ku bilaabi kartaa ku tababbarka guriga. Jiggerku waa hal qalab oo lagu gato bilowga.
#8. Layliska Mixology
Markaad barato farshaxanka shubista, tallaabada xigta ee noqoshada baarkaarre oo aan waayo -aragnimo lahayn waa inaad ku tababarto samaynta is biirsigaaga.
Waxaad ka bilaabi kartaa cuntooyinka giniga iyo tonic -ka, ilaa iskudhafyada ka sii adag.
In kasta oo aysan ahayn qof kasta oo noqda dhakhaatiir isku dhafan, haddana fahamka sida loo sameeyo is biirsaday waa muhiim.
#9. Calaamadda Shaqada
Qor resume aad u cajaa'ib leh oo ka codso shaqadaas. Waa innagii mar hore!
Noqoshada bar -baarka waxay u baahan tahay wax ka badan barashada sida laysugu daro cabitaannada. Xiriirka macmiilku waa xirfad loo baahan yahay oo ay ku jirto hawlo badan. Waxaad isku dari doontaa cabitaannada, nadiifin doontaa baarka, hubi inay jiraan cabitaanno ku filan, marka lagu daro inaad isha ku hayso macaamiisha si aysan uga bixin lacag la'aan. Xaaladaha ka sii daran, dooda oo burburiya waxyaabaha baarka ku jira. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad si taxaddar leh ula socoto daqiiqad kasta.
Gebogebadii, raac talooyinkan kor ku xusan oo baro sida loo noqdo nin baarka ka shaqeeya oo aan khibrad lahayn.
Lacag lagu siiyo Socdaalka: Shaqooyinka ugu Wanaagsan ee aad Heli Karto - Wareegga Hantida
30 shaqo sharci ah oo laga helo shaqooyinka guriga hadda la shaqaaleysiinayo - The Wealth Circle
15 SHAQO BIXIYA $ 100 SAAC 2022 | LACAG SOON
Dhiganeyaasha-vs-Doordash: Kuwee ku guuleysta Caqabadda Bixinta Cuntada ee…
15ka Apps ee Raadiyaha ugu Wanaagsan ee Android | 2022
10ka Meelood ee ugu Wanaagsan ee aad isaga fariisan karto Oregon
Top 10 Majaajilaystayaasha Ugu Mushaarka Badan Adduunka
Majaajilo waa farshaxan la jecel yahay laakiin adag. Waad ogtahay in ay fududahay in la sameeyo…
10-ka ugu sarreeya Ciyaartoyda ugu mushaarka badan Forbes 2022
FORBES ayaa soo saartay liiska ciyaartoyda ugu mushaarka badan adduunka 2022, taasoo calaamad u ah…
Waa maxay Caddaynta Dakhliga? - Waa maxay dukumentiyada loo baahan yahay 2022
Caddaynta dakhliga waa dukumeenti muujinaya dakhligaaga muddo cayiman, badiyaa sanad. Dukumentiyadan…
Xulashada Xirfadaha Ugu Fiican Mustaqbalka | 10
Ka doodista mawduucyada sida xirfadaha, odoroska shaqada, iyo rajada shaqada waxay u noqon kartaa qaar madadaalo leh kuwa kalena cabsi ayay u noqon kartaa.…